Automatic nipaipaika Machine, hydraulic fandavahana, Automatic nipaipaika Machine - SUCHUANG
Tongasoa eto amin 'ny tranonkala!
Adjustable Multiple ampela fanazaran
SS-8616 hydraulic ary atsofony Machine
74/92 Automatic ary atsofony Machine
SS-CN23 NC ary atsofony Machine
SS-E5 hydraulic ary atsofony Machine
SS-CN18 NC ary atsofony Machine
SS-6532 Gear Type nipaipaika Machine (mitsangana)
Zhejiang hafainganam-pandeha sy ny mekanika teknolojia mpiara., LTD., Naorina tamin'ny 2002, dia hita ao Wenzhou, Zhejiang yueqing hazomalahelo tanàna, dia mandeha ho azy nipaipaika matihanina milina, hydraulic fanazaran mpanamboatra. Ny orinasa dia manana vondrona miavaka talenta ara-teknika, dia manana endrika mahery sy ny fampandrosoana ny fahaizany, ny azo natao araka ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa marika isan-karazany fitaovana milina manokana. People-mirona orinasa, mikiry toetra aloha ny fitsipika, avo lenta, fitsipika ambony.
Zhejiang Suchuang Mechanical Teknolojia Co., Ltd.
People-mirona orinasa, mikiry toetra aloha ny fitsipika, kalitao avo, avo standards.For ny mpanjifa dia misy hery, hevitra, hametraka rafitra fanaraha-maso hentitra kalitao sy ny mpanjifa fahafaham-po.
Trade Show Name: Intermach Date ireo nanatrika ny: 2016 .4 Host Firenena / Region: CN Fampidirana: Wenzhou fampirantiana iraisam-pirenena ny NC fitaovana milina. CNC milina fanapahana vy fitaovana ...
NO.211, zhongtai lalana, xingguang faritra indostrialy, liushi tanàna, yueqing tanàna, faritanin'i Zhejiang
Automatic Nut Tapping Machine, Bore Well Drilling Machine Price, Auto nipaipaika Machine, -Bazana nipaipaika Machine,